အမျိုးသားများအတွက်ဇိမ်ခံသံမဏိကိုယ်ထည်နာရီများကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်လုံးဝမ ၀ ယ်ပါနှင့် WoopShop®
$37.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $377.99
အရောင် ကိုရွှေအပြာမြင့်တက် ကိုရွှေအနက်ရောင်ထ Silver, White, Silver, Black က အပြာအနက်ရောင် ရွှေ Black က အားလုံးအပြာရောင်
ကိုရွှေအပြာမြင့်တက် ကိုရွှေအနက်ရောင်ထ Silver, White, Silver, Black က အပြာအနက်ရောင် ရွှေ Black က အားလုံးအပြာရောင်
အမျိုးသားများအတွက်ဇိမ်ခံသံမဏိ Quartz နာရီ - နှင်းဆီရွှေရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
band အကျယ်: 22mm
feature ကို: နာရီကိုကြည့်ရန်ဒဏ်ခံနိုင်သောတောက်ပအော်တိုရက်စွဲ၊Chronograph, ပြီးပြည့်စုံသောပြက္ခဒိန်, ရေစိမ်ခံနိုင်သော,ရေကူးတောက်ပလက်စွဲ
Quartz- နာရီ: Business Watch
ရွှေအိတ်နှင့်အတူအပြည့်အဝကိုရွှေအပြာရောင်သံမဏိတီးဝိုင်း။ ဒီဟာစတိုင်ကျတဲ့စီးပွားရေးနှင့်အပန်းဖြေနာရီ။ chronograph၊ အလိုအလျောက်ပြက္ခဒိန်၊ ရေစိုခံ၊ shockproof၊ luminous နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ; အားလုံးအခါသမယများအတွက်သင့်လျော်သော။
လှုပ်ရှားမှု - Time Module Quartz လှုပ်ရှားမှု (ဂျပန်တွင်လုပ်သည်)၊ တိကျသောခရီးသွားခြင်း၊ လုပ်ငန်းသက်တမ်း ၂ နှစ်
3ATM / 30M ရေစိုခံ (ရေအေးရေချိုးခန်းနှင့်ရေကူးကိုထောက်ပံ့သည်၊ ရေအောက်နာရီကိုလည်ပတ်နိုင်ခြင်း၊ ရေပူကိုမထောက်ပံ့ပါ);
သံမဏိ - သံချေးခြင်း၊ မှေးမှိန်ခြင်းများအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ သံမဏိခါးပတ်သည်သင်၏လက်ကိုခြစ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်လမပြည့်မီကတ်ကိုလက်ခံရရှိသည် ကောင်းစွာထုပ်ပိုး ခလုတ်သုံးခုစလုံးအလုပ်လုပ်သည်။ ပြင်ပ။ နာရီတော်တော်လျောက်ပတ်ပါတယ်
ကုန်ပစ္စည်းသည်အချိန်တိုအတွင်းရောက်လာပြီး၊ သေတ္တာသည်အကြောင်းအရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအရာအားလုံးအလုပ်လုပ်သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးလည်းကောင်းသည်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အလွန်လျင်မြန်စွာပေးပို့ !!! ငါစတိုးဆိုင်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအကြံပြု !!!
ကုန်ပစ္စည်းများသည်အချိန်တိုအတွင်းရောက်သည်။ ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကညွှန်ပြသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်